नवराज सरलाई बिन्ती छ, तपाईं राजनीतिमा नआउनुस् ! यो दुर्गन्धमा तपाईं नमुछिएकै राम्रो - Dainik Nepal
नवराज सरलाई बिन्ती छ, तपाईं राजनीतिमा नआउनुस् ! यो दुर्गन्धमा तपाईं नमुछिएकै राम्रो
दैनिक नेपाल २०७४ भदौ २९ गते ८:२५
नवराज सिलवालले इमानको लडाईं लडे । त्यो स्वाभिमान र न्यायको लडाईं थियो । जब लडाईं सफल भएन उनले हाँसीखुसी राजीनामा दिए । नैतिकताको आधारमा आफ्नो बाटो लागे । प्रहरी प्रशासनमा फेरि फर्केर दुर्गन्धित खेल खेल्नेतिर लागेनन् ।
डीआइजी नवराज सिलवालको राजीनामा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । प्रहरीको आइजीपीका दाबेदार नवराज सिलवालले इमानको लडाईं लडे । त्यो स्वाभिमान र न्यायको लडाईं थियो । जब लडाईं सफल भएन उनले हाँसीखुसी राजीनामा दिए । नैतिकताको आधारमा आफ्नो बाटो लागे । प्रहरी प्रशासनमा फेरि फर्केर दुर्गन्धित खेल खेल्नेतिर लागेनन् ।
राजीनामा भनेको त राजीखुशीले जागिर छोड्नु हो । त्यसैले चित्त दुखेर वा राजीनामा दिन बाध्य हुने स्थिति आउनु ठीक होइन । आइजीपी नियुक्तिमा चित्त नबुझेपछि अदालत पुगेका नवराज सिलवालको रिट उपर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको फैसलाको आशय नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनु भन्ने थियो । तर, सरकारले त्यसलाई पनि लत्याउँदै दोस्रो वरियतामा रहेका व्यक्तिलाई आइजीपी बनायो । त्यसबिरुद्ध सिलवालले फेरि सर्बोच्चमा रिट दाएर गरेका थिए । फैसला धेरैचोटी सर्दैसर्दै अन्त्यमा त रिट नै खारेज भयो । जे होस् कानुनलाई जसरी परिभाषित गरे पनि मिल्दो रहेछ । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ, हामी मानिसलाई त ।
सम्मानित अदालतको फैसलाबिरुद्ध बोल्न मिल्दैन रे, तर यति त बोल्छु बोल्छु, प्रधानन्यायाधीशको तजबिज अनुसार फैसला हुने र कानुनलाई आफू नजिकको मान्छेको हित अनुकुल हुने गरी व्याख्या वा परिभाषित गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ। न्यायालयमा सरकारको निर्णय चल्दैन र चल्नु हुँदैन । किनकी न्यायालय स्वत्रन्त्र निकाय हो । उसको बटमलाइन भनेको सबैलाई निष्पक्ष न्याय दिनु नै हो । हुन त मूल्यांकन गर्ने शैली र आधार आफ्नै होलान् । तर, भाषा र परिभाषा प्रयोग गरेर कसैमाथि अन्याय गर्नुहुँदैन । जब न्यायालय नै विवादमा तानिन्छ, तब त्यस्तो देशमा प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन । एउटै मुद्दामा दुइथरी फैसला आउँदा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले सुशीला कार्की ठीक कि अहिलेका प्रधान न्यायाधीश ठीक भनेर बुद्दिजीबी वर्गले पक्कै प्रश्न गर्ने छन् । कतै सुशीला कार्कीलाई जस्तै महाअभियोग लगाउलान् भन्ने डरले पो यस्तो फैसला गरेको हो कि ? वा सरकारसँगको मिलेमतोमा यस्तो फैसला गरेको हो ? आम मानिसले सामाजिक सञ्जालमा यस्तैयस्तै प्रतिक्रिया गरिरहेको देखिएको छ ।
धेरैको आरोप छ, आउने चुनावमा प्रभाब पार्न सरकारले आफू निकटका व्यक्तिलाई आइजीपी बनाइयो भनेर । सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्ति गर्नुको एउटा बलियो कारण यही हो भनेर बुझ्नेको जमात पनि ठूलै छ । आइजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र अदालत अनि सरकार दुवै बिबादमा तानिनु राम्रो होइन् । यसले गलत नजिर स्थापित गराउँछ । जसले गर्दा न्यायालयको गरिमा र विश्वासमाथि आँच आउन सक्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी प्रशासन कहिले पनि बलियो र निष्पक्ष हुन सक्दैन । प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक पार्टीले नियुक्ति गरेको आइजीपीले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्न कदापि सक्दैनन, किनकी जसले नियुक्ति गर्यो त्यसले आफ्नो फाइदाका लागि बिभिन्न किसिमका दबाबहरु दिने गर्दछन् । र बाध्यात्मक रुपले हुन्न भन्ने अवस्था पनि रहन्न ।
यदि अदालतले नै अन्याय गर्यो भने कहाँ जाने ? त्यसैले अदालतको फैसलामा राजनीतिक गन्ध आउनु हुँदैन् । हाइप्रोफाइल केसमा त यस्तो फैसला आउँछ, अनि सर्बसाधारणको हकमा के होला ? आफ्नो मुद्दा नै खारेज भएपछि यस्तो स्थितिमा राजीनामा नगरेर अरु के गरुन त नवराज सिलवालले ? तर असली न्याय भनेको जनताले दिन्छन, समाजले दिन्छ, आफूले गरेको काम र योगदानले दिन्छ । त्यसैले मेरो बिचारमा त चित्त नदुखाउँदा नै बेस होला सिलवालज्यू । यो देशमा तपाईं मात्र अन्यायमा परेको एक्लो व्यक्ति होइन, तपाईं जस्तै ठूलो अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु यो देशमा धेरै छन् । त्यसैले कुनै अचम्म पनि मान्नु पर्दैन् । र, कुनै दुःख पनि मान्नु पर्दैन । तपाईंले मुद्दा हारेको हैन् । तपाईं सरकारले नियुक्त गर्ने आइजीपी बन्न सक्नुभएन होला । तर, जनताको मनमा तपाईं एकजना सक्षम प्रहरी अधिकारी र आइजीपीका हकवालाको रुपमा सँधै रहिरहनुहुनेछ ।
सिलवाल सरलाई एउटै बिन्ती छ, तपाईंका लागि राजनीति भन्दा अरु क्षेत्र नै ठीक छ । त्यो भनेको सामाजिक क्षेत्र हो । नेपालको राजनीति एउटा दुर्गन्धको खेल भएको छ । यो हिलोमा तपाईं नपरेको नै राम्रो हुन्छ । किनकी तपाईंले जुन छवि, इमान र प्रतिष्ठा कमाउनुभएको छ, त्यो धुलोमा परिणत हुन पनि सक्छ ।
अब तपार्इं स्वत्रन्त्र नागरिक हुनु भयो । अब तपार्इं पनि राजनीति गर्न सक्नु हुन्छ, अनि चित्त नबुझेको कुरा मज्जाले बोल्न वा भन्न सक्नुहुन्छ । प्रहरी प्रशासनमा जस्तै अरु क्षेत्रमा लागेर पनि देश र जनताको सेवा गर्न सक्नु हुन्छ । किनकी राजनीति गर्ने बन्देज कसैलाई पनि छैन् । देश र जनतालाई तपाईंको योग्यता र योगदानको आवश्यक्ता छ । तर, सिलवाल सरलाई एउटै बिन्ती छ, तपाईंका लागि राजनीति भन्दा अरु क्षेत्र नै ठीक छ । त्यो भनेको सामाजिक क्षेत्र हो । सामाजिक क्षेत्र तपाईं जस्ता इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ व्यक्तिका लागि धेरै फराकिलो छ । किनकी नेपालको राजनीति एउटा दुर्गन्धको खेल भएको छ । यो हिलोमा तपाईं नपरेको नै राम्रो हुन्छ । किनकी तपाईंले जुन छवि, इमान र प्रतिष्ठा कमाउनुभएको छ, त्यो धुलोमा परिणत हुन पनि सक्छ । तपाईंले प्रहरी क्षेत्रमा बसेर सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा जति काम गर्नुभयो, त्यसैको अनुभव अनुसार तपाईंले देशलाई धेरै योगदान दिन सक्नुहुन्छ । तपाईं जस्ता इमान्दा र कर्मठ व्यक्तिसँग हातेमालो गर्न लाखौं नेपाली तयार छन् ।
त्यसैले जे भयो राम्रै भयो, जे हुन्छ त्यो पनि राम्रै हुन्छ । जीवन र संघर्ष एक अर्काको अर्को पाटो हो । आशा गरौँ, पुरानो बाटाहरु टुंगिए पनि नयाँ बाटाहरु अवश्य फेला पर्ने छन् । अर्थात एउटा ढोका बन्द भए पनि अरु ढोकाहरु खुल्न सक्छन् । किनकी देश र जनताका लागि राम्रो मान्छेको धेरै खाँचो छ । त्यही खाँचोले नै तपाईंलाई तपाईंको नयाँ गन्तब्यसम्म पुर्याउने छ ।